Last reply by uglyangel72 6 ezinsukwini ezidlule
Last reply by TerryN21 17 amahora adlule
Hey All, I've seen a few instances of SSL_ERROR_UNSUPPORTED_HASH_ALGORITHM since the last update. https://www.loot.co.za/ is one notable example. The same site opens fine… (funda kabanzi)
Asked by SytheZN 3 izinyanga ezidlule
Last reply by SytheZN 3 izinyanga ezidlule
I got a new little start-up error from Firefox (I only have one GPU - AMD/ATI RV620 FirePro 2450): $ firefox [GFX1-]: More than 1 GPU detected via PCI, cannot deduce ven… (funda kabanzi)
Asked by Ian! D. Allen 3 emasontweni adlule
Last reply by Ian! D. Allen 3 emasontweni adlule
Asked by warp4dennis 1 isonto elidlule
Last reply by jank1 1 usuku oludlule
Asked by Charles 1 isonto elidlule
Constantly, however quite sporadically, links or buttons within websites just stop working and go dead: but only when using Mozilla on my windows computer. For instance, … (funda kabanzi)
Asked by naturedr 6 ezinsukwini ezidlule
Asked by neilmannix 6 ezinsukwini ezidlule